ဒီနေ့မှာကျရောက်လာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ (၃၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မနှစ်ကပျော်ခဲ့တာလေးတွေ ပြန်ပြောရင်း လွမ်းဆွတ်သတိရနေတဲ့ လပြည့်ကဗျာ – Shwe Likes
ဒီနေ့မှာကျရောက်လာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ (၃၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မနှစ်ကပျော်ခဲ့တာလေးတွေ ပြန်ပြောရင်း လွမ်းဆွတ်သတိရနေတဲ့ လပြည့်ကဗျာ
Shwe | November 26, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ရေမွန် ကတော့ မြန် မာနိုင်ငံရဲ့ Rock ဂီတ ရေစီးေြ ကာင်းမှာ အောင်မြင်ေ နတဲ့ တေးသံရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါသနာ ပါတဲ့ ဂီတကို လုပ်ကိုင်ေ နရင်းနဲ့ မိသားစုကို အချိန်ပေးတတ်တဲ့ အနုပညာရှင် ရေမွန်လေး က ဒီကနေ့၂၆ ရက် နိုဝင်ဘာ လမှာ (၃၃)နှစ်ပြည့်သွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းတွေ ကို နှလုံးသား နဲ့သီဆိုပြီး ဂီတနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ တဲ့ အဆိုေ တာ်ရေ မွန်ကတော့ လူထုတော်လှန်ရေးကြီးမှာ ယုံကြည်ချက်ခို င်မာစွာနဲ့ အမှန်တရားဘ က်ကရပ်တ ည်ခဲ့ပြီး လွတ်မြောက်နေ ရာတနေရာမှာစ စ်သင်တန်း တတ်ရင်း ကျန်းမာရေးေ ကြာင့် ကွယ်လွန် သွားခဲ့တာလည်းြ ဖစ်ပါတယ်။ ရေမွန်ကွ ယ်လွန်သွားတာ အခုဆိုရင် (၅)လကျော် ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရှိေ တာ့ပေမယ့် သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲ မှာတော့ အမြဲတ မ်းရှင်သန်နေသူ တစ်ယောက်ပဲဖြ စ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေမွန်ရဲ့အမေ ဒေါ်ခင်မြတ် မွန်နဲ့ ညီမဖြစ်သူ လပြည့်က ဗျာတို့က ရေမွန်အပေါ် အရမ်း သတိရနေပြီး ရေမွန်နဲ့ပတ် သက်တဲ့ အမှတ်တ ရလေးတွေကို အမြဲပြန်ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတ ယ်။
” မနှစ်က ပျော်ပျော် ပါးပါးကြီးသူင ယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုင်မှာ မွေးနေ့ ပွဲလေးကျင်း ပခဲ့တာ… ဒီနှစ်တော့ မွေးနေ့ရှင် မရှိတော့ တဲ့နှစ်လေးကို… တိတ်တဆိ တ်ဖြတ်သန်းရ မယ်လို့ ဘယ်ထင် မလဲနော်… ရင်တွေ လဲကွဲရပါတယ်… သီချင်းတွေ တူတူဆိုခွင့် မရှိတော့တာေ လးတော့ နှမြောဆုံးပဲ… ယောကျာ်းလေး အသုံးဆောင်တွေမြ င်တိုင်း ဘပီနဲ့သာဆို လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်လေးတော့ေ တွးမိတယ် …. တက်နိုင်သမျှ အတွေးထဲ ဝင်မလာေ အာင်မေ့ထားတယ်
ကျန်ရှိနေ တဲ့ဘဝကို အကောင်း ဆုံးလျှောက်လှမ်း မယ် ….. သူပြန်လာချင်တဲ့ လူ့ဘ ဝလေးကို မြန်မြန်ပြန်လာနိုင်ဖို့ တက်နိုင်သမ ျှအစွမ်းကုန် လှူတန်းမယ် ကုသိုလ်ေ လးတွေလုပ်မယ် ဒါပါပဲ အရမ်းမတွေးချင်ဘူးအားလုံးလဲ သတိရနေပါတ ယ်ဘပီ ….. Happy Birthday ငါ့ အကိုကြီး You’re my world and I love you so much ❤️ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန် ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ေရမြန္ ကေတာ့ ျမန္ မာနိုင္ငံရဲ့ Rock ဂီတ ေရစီးေျ ကာင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေ နတဲ့ ေတးသံရွင္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါသနာ ပါတဲ့ ဂီတကို လုပ္ကိုင္ေ နရင္းနဲ႔ မိသားစုကို အခ်ိန္ေပးတတ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ေရမြန္ေလး က ဒီကေန႔၂၆ ရက္ နိုဝင္ဘာ လမွာ (၃၃)ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သီခ်င္းေတြ ကို ႏွလုံးသား နဲ႔သီဆိုၿပီး ဂီတနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ တဲ့ အဆိုေ တာ္ေရ မြန္ကေတာ့ လူထုေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ယုံၾကည္ခ်က္ခို င္မာစြာနဲ႔ အမွန္တရားဘ က္ကရပ္တ ည္ခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေန ရာတေနရာမွာစ စ္သင္တန္း တတ္ရင္း က်န္းမာေရးေ ၾကာင့္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့တာလည္းျ ဖစ္ပါတယ္။ ေရမြန္ကြ ယ္လြန္သြားတာ အခုဆိုရင္ (၅)လေက်ာ္ ရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရွိေ တာ့ေပမယ့္ သူ႔ကိုခ်စ္ၾကတဲ့ သူေတြရဲ့ ႏွလုံးသားထဲ မွာေတာ့ အျမဲတ မ္းရွင္သန္ေနသူ တစ္ေယာက္ပဲၿဖ စ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရမြန္ရဲ့အေမ ေဒၚခင္ျမတ္ မြန္နဲ႔ ညီမျဖစ္သူ လျပည့္က ဗ်ာတို႔က ေရမြန္အေပၚ အရမ္း သတိရေနၿပီး ေရမြန္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အမွတ္တ ရေလးေတြကို အျမဲျပန္ျပန္ေျပာေလ့ရွိပါတ ယ္။
” မႏွစ္က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးႀကီးသူင ယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆိုင္မွာ ေမြးေန႔ ပြဲေလးက်င္း ပခဲ့တာ… ဒီႏွစ္ေတာ့ ေမြးေန႔ရွင္ မရွိေတာ့ တဲ့ႏွစ္ေလးကို… တိတ္တဆိ တ္ျဖတ္သန္းရ မယ္လို႔ ဘယ္ထင္ မလဲေနာ္… ရင္ေတြ လဲကြဲရပါတယ္… သီခ်င္းေတြ တူတူဆိုခြင့္ မရွိေတာ့တာေ လးေတာ့ ႏွေျမာဆုံးပဲ… ေယာက်ာ္းေလး အသုံးေဆာင္ေတြၿမ င္တိုင္း ဘပီနဲ႔သာဆို လိုက္မွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္ေလးေတာ့ေ တြးမိတယ္ …. တက္နိုင္သမၽွ အေတြးထဲ ဝင္မလာေ အာင္ေမ့ထားတယ္
က်န္ရွိေန တဲ့ဘဝကို အေကာင္း ဆုံးေလၽွာက္လွမ္း မယ္ ….. သူျပန္လာခ်င္တဲ့ လူ႔ဘ ဝေလးကို ျမန္ျမန္ျပန္လာနိုင္ဖို႔ တက္နိုင္သမ ၽွအစြမ္းကုန္ လႉတန္းမယ္ ကုသိုလ္ေ လးေတြလုပ္မယ္ ဒါပါပဲ အရမ္းမေတြးခ်င္ဘူးအားလုံးလဲ သတိရေနပါတ ယ္ဘပီ ….. Happy Birthday ငါ့ အကိုႀကီး You’re my world and I love you so much ❤️ ” ဆိုၿပီး သူမရဲ့လူမႈကြန္ ယက္ေပၚမွာ ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
SP ထားတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ပြန်ပေါ်လာလို့ အားပေးနေသူတွေ လွမ်းနေပါတယ် ဆိုသူတွေကို ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
တိမ်းရှောင်နေရ စဉ်တုန်းက ဦးဖိုးဖြူ ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ထမင်းတစ်နပ်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ခုလက်ရှိ ရည်းစားထ ပ်မထားရတဲ့ သူ့ရဲ့အဓိက ကြော င်းအရင်းကို ဝန်ခံလာပြီဖြစ်တဲ့ မိုးအောင်ရင်